မိန်းကလေး တို့ သတိထားသင့်သော ယောင်္ကျားများ ၏ ထိုခဏ - APANNPYAY
Home / ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ / မိန်းကလေး တို့ သတိထားသင့်သော ယောင်္ကျားများ ၏ ထိုခဏ
မိန်းကလေး တို့ သတိထားသင့်သော ယောင်္ကျားများ ၏ ထိုခဏ
၁ ။ ခဏလေးပါကွာ …. မကြောက်ပါနဲ့ .. တကယ်ကိုခဏလေး ပါပဲ
ခပ်တုိုးတိုး နဲ့ လေသံကချွဲပစ်ပြီး ကြက်သီးထဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် သာမက ရင်တွေ တစ်ဒိုင်းဒိုင်း ခုန် လာစေသော ထိုစကားသံ နှင့်အတူ တစ်ဆတ်ဆတ်တုန်ရီနေတဲ့ အပျိုစင်မလေး ရဲ့ ခန္ဒာပေါ်က စုန်ဆန်ချည် အလုပ်များနေတဲ့ လက်တစ်စုံ ပိုင်ရှင် ရဲ့ စကားလေး တစ်ခွန်းက ညီမ တို့ ဘဝတစ်ခုလုံးကို စုတ်ပြတ်ကြေမွ သွားစေနုိုင်တယ် ဆိုတာ သတိထားစေ လိုပါတယ်။
တစ်သက်စာ ထိန်းသိမ်းလာခဲ့ရတဲ့ အပျိုစင် ဘဝ ဟာ ထို ပုရိသ ရဲ့ ခွင့်တောင်းလိုဟန်နှောပေမယ့် အမိန့် ပေးသံပျော့ပျော့ ရဲ့ ထုို ခဏ အောက်မှာ တစ်သက်စာ ကြေမွ ပျက်သုန်းသွား နုိုင်တယ်။တစ်မိနစ်အတွင်းမှာတင် အပျိုစင်ဘဝ ပျောက်ကွယ်ပျက်စီးသွားနုိုင်တယ်ဆိုတာ သတိချပ်စေလိုပါတယ်။
မိန်းကလေး တို့ သိထားဖို့ က အပျိုစင်ဘဝ ကို မင်္ဂလာရှိသော မင်္ဂလာဦးည တိုင် ထိန်းသိမ်းဖို့ ၊တန်ဖိုးထားဖို့ အင်မတန် ချုပ်တည်း ထိန်းသိမ်းခဲ့ရ တာ ကိုက ဘဝ တစ်သက်စာ အတွက် တန်ဖိုးရှိသော၊ မင်္ဂလာရှိသော သတို့ သမီးအဖြစ် ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ တန်ဖိုးထားမှု၊မြတ်နုိုးမှု ၊ လေးစားမှု ကို တစ်သက်စာ ပိုင်ဆိုင်နုိုင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
မိမိကို လက်ထပ်မည်၊ လက်မထပ်မည် မသေချာ သေးတဲ့ ချစ်သူရည်းစား တစ်ယောက် ရဲ့
ခဏလေး ပါကွာ ဆိုတဲ့ အလေးမထားတဲ့စကား တစ်ခွန်းအောက်မှာ သင်အရည်ပျော်နစ်မွန်းခဲ့ မိရင်တော့.. သင်ပေးဆပ်ရမယ့် တန်ဖိုးက ထိုခဏလေး အတွက် တန်ပါရဲ့ လား လုို့ ထိုစကားကြားစဉ် ခဏမှာ တွေးမိ စဉ်းစားမိစေချင်ပါတယ်။
၂ ။ ခဏလေး လိုက်ခဲ့ပါကွာနော်
ခဏလေး ဟိုနားလိုက်ခဲ့ပါ ။ ဒီနားလာခဲ့ပါဆိုတဲ့ ချိန်းဆိုမှု တွေ အောက်မှာ အပျိုစင်ဘယ်နှစ်ယောက် လောက် လမ်းပျောက်ခဲ့ကြ ပြီးပြီလဲ ။
ခဏလေး လိုက်ခဲ့ပါ ကွာ နော် ဆိုတဲ့စကားနောက်မှာ ကောက်ကောက်ပါအောင် လိုက်ခဲ့မိတဲ့ အပျိုမလေး တို့ ရောက်သွားနုိုင်တဲ့ အပေါစားတည်းခိုခန်း တွေ၊ထူထပ်တဲ့ခြုံဖုတ်တွေ၊လူပြတ်တဲ့လမ်းကြားတွေ၊စသည်စသည် နေရာများ ကို အလွယ်တကူ အလျော့ပေးအလိုမလိုက် အားမနာပဲငြင်းဆန်နုိုင်တဲ့သတ္တိ နဲ့ ခွန်းအား ပြည့်ဝ နေစေလိုပါတယ်။
မိမိ ယုံကြည်လေးစားရတဲ့ ချစ်သူ ပင်ဖြစ်လင့်ကစား ပုံမမှန်တဲ့ နေရာဒေသတွေ ကို ချိန်းဆိုခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အခါ မိမိတန်းဖိုးထား ရတဲ့ အပျိုစင်ဘဝကို အစွမ်းကုန်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ဖို့ သတိလေးကပ်ပြီး အလိမ္မာစကားနှင့်ငြင်းပယ် နုိုင်ဖို့ ကြိုတင်စဉ်းစား ပြင်ဆင်ထားသင့်ပါတယ်။
၃ ။ ခဏတော့ စောင့်ပါကွာ
တစ်ချို့ ယောင်္ကျားတွေဟာ ရည်မှန်းချက်တစ်စုံတစ်ရာ အတွက် ကြိုးပန်းချိန်မှာ ၄င်းတို့ရဲ့ ချစ်သူ မိန်းကလေးများကို စိတ်ရှည်လက်ရှည်စောင့်စား နေဖို့ ခွင့်ပန်လေ့ရှိပါတယ်။သိပ်ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့သော ကတိမတည်တဲ့ယောင်္ကျားအချို့ ကို စောင့်မျှော်ရင်း တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပျိုမြစ်ခြင်းတွေ ကိုပေးဆပ်လုိုက်ရတဲ့ အညာခံ အပျိုကြီးတွေ လဲအများကြီး ရှိနေတယ်ဆိုတာ တော့မမေ့စေချင်ဘူး။
ဒါဆို မစောင့်ပဲနေဖို့ လားဆိုတော့လဲ မဟုတ်ပါဘူး။စောင့်မျှော်ပါ ။ မိမိချစ်သူ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ရောက်သည်အထိ တတ်နုိုင်ရင် ပါရမီဖြည့်သင့်ရင်ဖြည့်ပြီးစောင့်မျှော်ပါ။ ဒါပေမယ့် ညီမတို့ ရဲ့ နှလုံးသားတံခါး ကိုသာ ချစ်သူအတွက်သော့ခတ် ထားပေးပြီး ညီမတို့ မျက်လုံးတွေကိုဖွင့်၊ နားတွေကို စွင့် ပြီး အဝေးရောက်ချစ်သူကို မျက်ချေမပြတ်ဖို့ လဲလိုတယ်ဆိုတာ မမေ့စေချင်ဘူး။
မိမိတုို့ ချစ်သူရဲ့ ခဏလောက်စောင့် ပေးပါကွာ ဆိုတဲ့စကားကို နာခံနေစဉ် ထိုခဏ မှာလဲ မိမိတုို့ တတ်စွမ်းသလောက် ကိုယ်ရေကိုယ်သွေးပြည့်ဝနေအောင်လဲ ကြိုးစားထားဖို့ လိုတယ်။
တစ်ချို့ ကရှိတတ်တယ်။ ကိုယ့်ချစ်သူက နုိုင်ငံခြားမှာပါရဂူဘွဲ့ ၊ သို့ ၊ စီးပွားရေးအတွက် အတွက်ကြိုးပန်းနေစဉ်ခဏမှာ ပြန်လာရင် ပါရဂူကြီး ပရော်ဖက်ဆာကြီး ၊ သူဌေးကြီး ဖြစ်မှာမို့ ငါကတော့ အလှအပပဲ ပြင်ထားမယ် ကျန်တဲ့အရည်အချင်းတွေ ရှိစရာမလုိုဘူးလို့ တွေးရင်း အချိန်တွေဖြုန်းတီးနေတဲ့ မိန်းမငယ်တစ်ချို့အတွက် တော့ ရင်လေးစရာပါပဲ။
ရုပ်ခန္ဒာ အလှအပ သည် ကြာရှည် မတည်မြဲ ၊ ပညာအလှသည်သာ ထာဝရ မြဲမြံပါတယ်။
တစ်ချို့ ယောင်္ကျားတွေ များကျတော့လည်း ခဏတော့စောင့်ပါကွာ ဆိုတဲ့စကားနောက်မှာ စုန်းစုန်းမြုတ်ပျောက်ကွယ်ရင်း အိပ်မက်တွေ အဖန်ဖန်ပေး ကြေအေးဖို့တေးတွေ ခဏခဏ ဆိုနေဆဲပဲပေါ့။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပါ…လူ့ ဘဝက သိပ်တိုပါတယ်။ တကယ်ကို ခဏလေး ပါပဲ။
ထုိုခဏလေး များစွာတွေထဲမှာ မှ ယောင်္ကျားများရဲ့ ထိုခဏ အတွက်တော့ ညီမတို့ ရဲ့ အပျိုစင်ဘဝနဲ့ မိမိတို့ ကိုယ်ပိုင်ဖန်းတီးတည်ဆောက်နို်င်စွမ်းတွေကို အယုံမလွယ်ပဲ အလေးအနက်ထား ကြိုးပမ်းထိန်းသိမ်းသင့်တယ် လို့ အကြံပြု လုိုက်ပါရစေနော်။
၁ ။ ခဏလေးပါကှာ …. မကွောကျပါနဲ့ .. တကယျကိုခဏလေး ပါပဲ
ခပျတိုးတိုး နဲ့ လသေံကခြှဲပဈပွီး ကွကျသီးထဖှယျကောငျးလောကျအောငျ သာမက ရငျတှေ တဈဒိုငျးဒိုငျး ခုနျ လာစသေော ထိုစကားသံ နှငျ့အတူ တဈဆတျဆတျတုနျရီနတေဲ့ အပြိုစငျမလေး ရဲ့ ခန်ဒာပျေါက စုနျဆနျခညျြ အလုပျမြားနတေဲ့ လကျတဈစုံ ပိုငျရှငျ ရဲ့ စကားလေး တဈခှနျးက ညီမ တို့ ဘဝတဈခုလုံးကို စုတျပွတျကွမှေ သှားစနေိုငျတယျ ဆိုတာ သတိထားစေ လိုပါတယျ။
တဈသကျစာ ထိနျးသိမျးလာခဲ့ရတဲ့ အပြိုစငျ ဘဝ ဟာ ထို ပုရိသ ရဲ့ ခှငျ့တောငျးလိုဟနျနှောပမေယျ့ အမိနျ့ ပေးသံပြော့ပြော့ ရဲ့ ထို ခဏ အောကျမှာ တဈသကျစာ ကွမှေ ပကျြသုနျးသှား နိုငျတယျ။တဈမိနဈ
အတှငျးမှာတငျ အပြိုစငျဘဝ ပြောကျကှယျပကျြစီးသှားနိုငျတယျဆိုတာ သတိခပျြစလေိုပါတယျ။
မိနျးကလေး တို့ သိထားဖို့ က အပြိုစငျဘဝ ကို မင်ျဂလာရှိသော မင်ျဂလာဦးည တိုငျ ထိနျးသိမျးဖို့ ၊တနျဖိုးထားဖို့ အငျမတနျ ခြုပျတညျး ထိနျးသိမျးခဲ့ရ တာ ကိုက ဘဝ တဈသကျစာ အတှကျ တနျဖိုးရှိသော၊ မင်ျဂလာရှိသော သတို့ သမီးအဖွဈ ခငျပှနျးသညျရဲ့ တနျဖိုးထားမှု၊မွတျနိုးမှု ၊ လေးစားမှု ကို တဈသကျစာ ပိုငျဆိုငျနိုငျဖို့ ဖွဈပါတယျ။
မိမိကို လကျထပျမညျ၊ လကျမထပျမညျ မသခြော သေးတဲ့ ခဈြသူရညျးစား တဈယောကျ ရဲ့
ခဏလေး ပါကှာ ဆိုတဲ့ အလေးမထားတဲ့စကား တဈခှနျးအောကျမှာ သငျအရညျပြျောနဈမှနျးခဲ့ မိရငျတော့.. သငျပေးဆပျရမယျ့ တနျဖိုးက ထိုခဏလေး အတှကျ တနျပါရဲ့ လား လို့ ထိုစကားကွားစဉျ ခဏမှာ တှေးမိ စဉျးစားမိစခေငျြပါတယျ။
၂ ။ ခဏလေး လိုကျခဲ့ပါကှာနျော
ခဏလေး ဟိုနားလိုကျခဲ့ပါ ။ ဒီနားလာခဲ့ပါဆိုတဲ့ ခြိနျးဆိုမှု တှေ အောကျမှာ အပြိုစငျဘယျနှဈယောကျ လောကျ လမျးပြောကျခဲ့ကွ ပွီးပွီလဲ ။
ခဏလေး လိုကျခဲ့ပါ ကှာ နျော ဆိုတဲ့စကားနောကျမှာ ကောကျကောကျပါအောငျ လိုကျခဲ့မိတဲ့ အပြိုမလေး တို့ ရောကျသှားနိုငျတဲ့ အပေါစားတညျးခိုခနျး တှေ၊ထူထပျတဲ့ခွုံဖုတျတှေ၊လူပွတျတဲ့လမျးကွားတှေ၊စသညျစသညျ နရောမြား ကို အလှယျတကူ အလြော့ပေးအလိုမလိုကျ အားမနာပဲငွငျးဆနျနိုငျတဲ့သတ်တိ နဲ့ ခှနျးအား ပွညျ့ဝ နစေလေိုပါတယျ။
မိမိ ယုံကွညျလေးစားရတဲ့ ခဈြသူ ပငျဖွဈလငျ့ကစား ပုံမမှနျတဲ့ နရောဒသေတှေ ကို ခြိနျးဆိုချေါဆောငျသှားတဲ့အခါ မိမိတနျးဖိုးထား ရတဲ့ အပြိုစငျဘဝကို အစှမျးကုနျထိနျးသိမျးကာကှယျဖို့ သတိလေးကပျပွီး အလိမ်မာစကားနှငျ့ငွငျးပယျ နိုငျဖို့ ကွိုတငျစဉျးစား ပွငျဆငျထားသငျ့ပါတယျ။
၃ ။ ခဏတော့ စောငျ့ပါကှာ
တဈခြို့ ယောင်ျကြားတှဟော ရညျမှနျးခကျြတဈစုံတဈရာ အတှကျ ကွိုးပနျးခြိနျမှာ ၄ငျးတို့ရဲ့ ခဈြသူ မိနျးကလေးမြားကို စိတျရှညျလကျရှညျစောငျ့စား နဖေို့ ခှငျ့ပနျလရှေိ့ပါတယျ။သိပျကောငျးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ တဈခြို့သော ကတိမတညျတဲ့ယောင်ျကြားအခြို့ ကို စောငျ့မြှျောရငျး တနျဖိုးရှိတဲ့ ပြိုမွဈခွငျးတှေ ကိုပေးဆပျလိုကျရတဲ့ အညာခံ အပြိုကွီးတှေ လဲအမြားကွီး ရှိနတေယျဆိုတာ တော့မမစေ့ခေငျြဘူး။
ဒါဆို မစောငျ့ပဲနဖေို့ လားဆိုတော့လဲ မဟုတျပါဘူး။စောငျ့မြှျောပါ ။ မိမိခဈြသူ ရညျမှနျးခကျြပနျးတိုငျရောကျသညျအထိ တတျနိုငျရငျ ပါရမီဖွညျ့သငျ့ရငျဖွညျ့ပွီးစောငျ့မြှျောပါ။ ဒါပမေယျ့ ညီမတို့ ရဲ့ နှလုံးသားတံခါး ကိုသာ ခဈြသူအတှကျသော့ခတျ ထားပေးပွီး ညီမတို့ မကျြလုံးတှကေိုဖှငျ့၊ နားတှကေို စှငျ့ ပွီး အဝေးရောကျခဈြသူကို မကျြခမြေပွတျဖို့ လဲလိုတယျဆိုတာ မမစေ့ခေငျြဘူး။
မိမိတို့ ခဈြသူရဲ့ ခဏလောကျစောငျ့ ပေးပါကှာ ဆိုတဲ့စကားကို နာခံနစေဉျ ထိုခဏ မှာလဲ မိမိတို့ တတျစှမျးသလောကျ ကိုယျရကေိုယျသှေးပွညျ့ဝနအေောငျလဲ ကွိုးစားထားဖို့ လိုတယျ။
တဈခြို့ ကရှိတတျတယျ။ ကိုယျ့ခဈြသူက နိုငျငံခွားမှာပါရဂူဘှဲ့ ၊ သို့ ၊ စီးပှားရေးအတှကျ အတှကျကွိုးပနျးနစေဉျခဏမှာ ပွနျလာရငျ ပါရဂူကွီး ပရျောဖကျဆာကွီး ၊ သူဌေးကွီး ဖွဈမှာမို့ ငါကတော့ အလှအပပဲ ပွငျထားမယျ ကနျြတဲ့အရညျအခငျြးတှေ ရှိစရာမလိုဘူးလို့ တှေးရငျး အခြိနျတှဖွေုနျးတီးနတေဲ့ မိနျးမငယျတဈခြို့အတှကျ တော့ ရငျလေးစရာပါပဲ။
ရုပျခန်ဒာ အလှအပ သညျ ကွာရှညျ မတညျမွဲ ၊ ပညာအလှသညျသာ ထာဝရ မွဲမွံပါတယျ။
တဈခြို့ ယောင်ျကြားတှေ မြားကတြော့လညျး ခဏတော့စောငျ့ပါကှာ ဆိုတဲ့စကားနောကျမှာ စုနျးစုနျးမွုတျပြောကျကှယျရငျး အိပျမကျတှေ အဖနျဖနျပေး ကွအေေးဖို့တေးတှေ ခဏခဏ ဆိုနဆေဲပဲပေါ့။
ဘာပဲဖွဈဖွဈ ပါ…လူ့ ဘဝက သိပျတိုပါတယျ။ တကယျကို ခဏလေး ပါပဲ။
ထိုခဏလေး မြားစှာတှထေဲမှာ မှ ယောင်ျကြားမြားရဲ့ ထိုခဏ အတှကျတော့ ညီမတို့ ရဲ့ အပြိုစငျဘဝနဲ့ မိမိတို့ ကိုယျပိုငျဖနျးတီးတညျဆောကျနျိုငျစှမျးတှကေို အယုံမလှယျပဲ အလေးအနကျထား ကွိုးပမျးထိနျးသိမျးသငျ့တယျ လို့ အကွံပွု လိုကျပါရစနေျော။